Messi: City iyo PSG waa kooxaha ugu wacan hadda – Gool FM
(Catalonia) 25 Nof 2017. Xiddigga Barcelona Lionel Messi waxa uu qiray in iminka kooxaha saadaasha la dul dhigi karo ay yihiin Manchester City iyo Paris Saint-Germain kaddib ololaha wacan ee soo maray.
Muwaadiniinta bilowgii ugu wacnaa oo ay koox England ah sameyn kartay ayey la timi iyada oo heshay 34 dhibcood 36 macquul ahaa ilaa iyo hada horyaalka waxa ayna dhalisay 40 gool.
PSG sidoo kale kaliya laba kulan ayey dhibco lumisay 13 jeer oo ay dheeshay waxa ayna dhalisay 43 gool.
Labada naadiba waxa ay si xsilooni leh ugu soo gudbeen wareegga 16-ka halka ay ka bad baadi doonaan kooxaha waa wey sida Barcelona balse Messi qudhiisa qeybaha dambe ayaa rabaa in uu ka horyimaado.
“City waa mid ka mida kooxaha ugu awoodda badan hadda waxaana la mid ah PSG,” ayuu iyiri Messi.
“Waxa ay ahaayeen labada naadi ee ugu quwadda badan ilaa iyo imika, laakiin ololuhu wuu dheeryahay.
“Marnaba meesha kama saaro Real Madrid waxa ay haystaan iyo khibradooda, walow ay iminka natiijooyinka heleyn sida dadku ka filayo. Bayern sidoo kale. Waxaa jira koox kale oo weyn oo ololahan halkaas joogi doonta, laakiin waa run, manta City iyo PSG ayaa ugu wacan.”
GOOGOOSKA: Manchester United vs Brighton 1-0 (Man U oo gool madi ah markale ku badisay)